Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Nwa nke Bruno Fernandes Akụkọ nke Na-emeghe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Football with the nickname "Lampard Portuguese".
Anyị Bruno Fernandes Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, nzụlite ezinụlọ, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ndụ ya na ihe ndị ọzọ amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ịmepụta ohere maka ndị otu yana ị nweta ihe mgbaru ọsọ. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle Bruno Fernandes 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Nwa nke Bruno Fernandes - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, Bruno Miguel Borges Fernandes a mụrụ na 8th ụbọchị Septemba 1994 na Maia, nke dị n'ógbè Metropolitan nke Porto, Portugal. A mụrụ ya na ndị nne na nna bụ ndị a na-amaghị.
Obodo Portuguese nke agbụrụ ọcha nwere mgbọrọgwụ Europe sitere na nzụlite ezinụlọ nke etiti wee zụlite ya n'obodo ya na Maia ebe o toro n'akụkụ nwanne nwoke nke okenye, Ricardo.
Bruno Fernandes Grew na Maia na Porto.
N'ịbụ onye tolitere na obodo Mai, Fernandes bụ ụdị nwatakịrị a na-adịghị ahụkebe nke na-enweghị ike ịghọ onye ọkpụkpọ bọọlụ, mmepe nke nwanne ya nwoke nke okenye, Ricardo kọwara n'ụzọ dabara adaba dị ka "enweghị atụmatụ B".
Iji mezuo nke a, ihe egwuregwu football anaghị atụ egwu ihe ọ bụla nwere ike ịbịata n'etiti ya na nrọ ya, ebe ọ na-agba bọl na imegide onye ọ bụla.
Bruno Fernandes soro ụmụ nwoke gbara afọ na nha dị iche iche gbaa bọọlụ n'oge ọ bụ nwata.
Mmụta Bruno Fernandes:
Maka nwatakiri nwoke nke kwadoro ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ football, ọ dịghị ihe Bekee Fernandes nwere ike ịchụ n'àjà gụnyere agụmakwụkwọ ka nwata ahụ si n'ụlọ akwụkwọ kwụsịrị tupu ya enwee ike ịgụcha akwụkwọ nchịkọta 11th.
N'adịghị ka ọtụtụ nkwụsịtụ, Fernandes abughi ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ nkwarụ. N'ezie, ọ bụ onye ọ bụla na-amụrụ ihe bụ onye na-echegbu onwe ya banyere ịzụlite ọrụ na football na Boavista FC, mgbe ọ na-enwe otu afọ stint na FC Infesta.
Bruno Fernandes (n'aka nri) ya na enyi ya na-egwu egwuregwu vidio tupu oge ọzụzụ na Boavista FC.
Bruno Fernandes Biography - Ndụ Mmalite Ndụ na Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ bụ na Boavista FC na Fernandes nwere ọtụtụ afọ ntorobịa ya. Mgbe ọ nọ na klọb ahụ, Fernandes bilitere n'ọkwa ya na nka nka nke bụ njirimara ụdị egwuregwu ya ugbu a.
Mgbalị bọọlụ na-esote hụrụ Fernandes ka ọ kwagara Novara Calcio ebe a kwalitere ya na ndị otu klọb mbụ na Serie B mgbe ya na ndị ntorobịa nọrọ naanị izu ole na ole.
Otú ọ dị, ọganihu Fernandes na ụlọ ọrụ ahụ enweghị obere nsogbu. Nwa nke 17 nke siri ike nkwurịta okwu na becametali ghọrọ onye agụụ ụlọ na ọ fọrọ nke nta ka ọ kwụsị ọchịchọ ya ịghọ ọkachamara egwuregwu bọọlụ.
Agbanyeghị, ọ mechara chọta ụkwụ ya na ala Italiantali, n'ihi enyemaka nke ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya ọkachasị enyi ya nwanyị hapụrụ ụlọ akwụkwọ wee bikọta ya na Italytali.
Bruno Fernandes na mbụ nwere ahụmịhe egwuregwu bọọlụ ịma aka na Italytali.
Bruno Fernandes Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
N'ịga n'ihu, Fernandes bịanyere aka na Udinese Calcio na nkwekọrịta onye nwe ya wee mee mmalite Serie A ya na 3rd nke Nọvemba 2013.
Mgbe ya na klọb ahụ nọrọ afọ atọ, Fernandes gbazitere na UC Sampdoria ebe ọ nwetara ihe otu egwuregwu otu afọ wee bụrụ atụmanya nke ọtụtụ ndị otu na-achọ.
Fernandes gbazinyere mbinye aka ya na mpaghara Portuguese, Sporting CP na nkwekọrịta afọ 5 wee kwadobela onwe ya dị ka onye na-achọ onye na-eto eto site na ịme ihe mgbaru ọsọ na ijigide ụdị ọmarịcha nke hụrụ ya aha Player of the Year nke Portuguese League na July 2018. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Bruno Fernandes eguzobewo onwe ya dị ka ndị ọkacha mmasị na Sporting CP na otu n'ime ndị na-achọkarị ndị na-eme egwuregwu etiti.
Bruno Fernandes Hụrụ Ndụ na Ana Pinho:
Bruno Fernandes bụ nwoke lụrụ nwanyị n'oge edere. Anyị na -ewetara gị akụkọ gbasara akụkọ nwoke na nwanyị na -emekọ ihe na ọnọdụ mmekọrịta ya ugbu a.
Iji malite, Fernandes amaghị na ọ nwere enyi nwanyị ọ bụla tupu ya ezute nwunye ya ịbụ Ana Pinho.
Di na nwunye ahụ zutere ma malite ịlụ nwanyị n'oge Ana na-agụ akwụkwọ na Portugal. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Fernandes kpọrọ ya ka ya na ya biri wee nyere ya aka imezu nrọ ya n'Italytali.
Bruno Fernandes na enyi ya nwanyị tụgharịrị nwunye Ana Pinho.
2015 bụ afọ ha weere mmekọrịta ha na ọkwa nke ọzọ site na ịlụ na 23 nke Disemba.
Alụmdi na nwunye ha nwere nwa nwanyị mara mma Matilde (amụrụ Jenụwarị 31st 2017). O nwere ike ọ gaghị adị anya tupu ha anabata nnabata nwa nwoke n'ime ezinụlọ ha.
Bruno Fernandes nwa nwanyị mara mma bụ Matilde.
Ndụ Bruno Fernandes Ezinụlọ:
A mụrụ Bruno Fernades n'ime ezinụlọ na-ahụkarị egwuregwu. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndị òtù ezinụlọ ya. Anyị na-amalite site Bruno Fernandes Ndị nne na nna.
Banyere Bruno Fernandes 'Nna:
Nna Fernandes bụ onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ hapụrụ egwuregwu ahụ iji nye ezinụlọ ya ezigbo ndụ.
Ya mere, Bruno na -eyi akara 8 nọmba iji kwụpụrụ nna ya nke nwere otu nọmba Jersey ahụ ụtụ.
Nọmba 8 bụkwa ihe atụ nke ụbọchị ọmụmụ Fernandes dịka amụrụ ya na 8th ụbọchị Septemba.
Banyere nne Bruno Fernandes:
Nne Fernandes bụ nne hụrụ football n'anya na onye na-akwado FC Porto. Ọ ghọrọ onye na -anụ ọkụ n'obi nke Sporting CP mgbe nwa ya nwoke gafere na klọb ahụ.
Mmepe a bụ nke na-egosi nkwado ogologo oge ọ na-enye Fernandes site na nwata ruo ụbọchị.
Banyere ụmụnne nwanne Bruno Fernandes:
Fernandes toro na ọtụtụ ụmụnne nwoke na nwanne nwanyị nke amachaghị maka ịchekwa maka nwanne ya nwoke nke okenye, Ricardo Fernandes.
Ricardo na Fernandes toro na ndị enyi mbụ ha na -egwu egwuregwu bọọlụ.
Banyere ndị ezinụlọ Bruno Fernandes:
N'ebe ezinụlọ Fernandes nọ, ọ nwere nwanne nna aha ya bụ Vitor Borges onye na -egwuri egwu maka Boavista.
Ndị ọzọ karịa Vitor ntakịrị amachaghị gbasara ndị otu Fernandes agbatịkwuru ezinụlọ gụnyere nne na nna nna ya yana nna nne na nne nne.
N'otu aka ahụ, amatabeghị Fernandes nwanne nna, nwanne nna, ụmụ nwanne na ụmụ nwanne na ihe omume ama ama nke akụkọ nwata ruo ụbọchị.
Bruno Fernandes nọ ọdụ na tebụl mmalite ya na ndị ezinụlọ ya amabeghị.
Ndụ nke Bruno Fernandes:
Kedu ihe na -eme Bruno Fernandes akara? nọdụ ala ka anyị na -ewetara gị ụdị agwa Fernandes iji nyere gị aka ịchọta ya nke ọma.
Ibido Fernandes persona bụ ngwakọta nke agwa zodiac Virgo. Ọ na -arụsi ọrụ ike nke ukwuu, na -emesapụ aka ma ọ naghị ekpughe ọtụtụ ihe gbasara ndụ onwe ya na nke onwe ya.
Na mgbakwunye, a ma ama Fernandes maka ọgụgụ isi ya ma nwee mmasị inweta ihe ọmụma banyere isiokwu ọ bụla.
Ihe omume ntụrụndụ na ọdịmma ya gụnyere iri ezigbo nri, ilele ihe onyonyo telivishọn niile, ihe nkiri na ọbụna egwuregwu bọọlụ. Na -esite na nke ahụ, ọ hụrụ n'anya iwepụta oge dị mma na ndị enyi na ezinụlọ.
Bruno Fernandes hụrụ ezigbo nri gụnyere sushi nke ọma.
Ndụ Bruno Fernandes:
Bruno Fernandes nwere ọnụ ahịa ruru nde $ 2 na ọnụ ahịa ahịa nke £ 31.50m dị ka n'oge ederede.
Ọ bụ ezie na mmalite akụ na ụba ya sitere na ụgwọ ọnwa ya na egwuregwu bọọlụ, Fernandes na -anụ ụtọ ma na -enweta ego site na nkwado ya na ụdị dị iche iche gụnyere Nike.
N'ihi nke a, onye egwuregwu bọọlụ na -ebi ụdị ndụ mara mma nke na -ahụ ka ọ na -anya ụgbọ ala dị oke ọnụ ma biri n'ụlọ dị oke ọnụ.
Na mgbakwunye, Fernandes na -eme ka ọ bụrụ ihe na -atọ ụtọ ileta gburugburu ebe mara mma na ebe ntụrụndụ mara mma n'oge ezumike.
Bruno Fernandes nwere ezigbo oge n'akụkụ osimiri, Ebe E Si Nweta: Instagram.
Bruno Fernandes Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie akụkọ Bruno Fernandes bụ nwata akụkọ ebe a bụ obere ihe a maara nke a na-adịghị agụnye na ya.
Bruno Fernandes nwere naanị egbugbu a ma ama na ogwe aka ekpe ya. N'otu akụkụ, nka ahụ na -egosipụta nọmba 8 nke bụ ihe atụ nke ụbọchị ọmụmụ ya.
N'akụkụ nke ọzọ, ọ na -egosipụta mkpụrụedemede “F” nke aha mbụ ya bụ Fernandes.
Foto nke Bruno Fernandes na-egosi ọmarịcha akara aka ya.
Onye na-ahụ maka nkà na ụma nke maara nkà na Portuguese ma mara ihe ndị bụ isi nke asụsụ Bekee na Ịtali ka a na-ahụtụbeghị sịga na ịṅụ mmanya.
Fernandes bụ n'oge nke post a na-achọsi ike nke atọ nke Manchester City, Manchester United na Athletico Madrid. Otú ọ dị, ndị Bekee nwere ohere ọzọ maka ịchekwa ọrụ ya.
Bruno Fernandes nwere ike ịnọ nso n'akụkụ Bekee. Ebe E Si Nweta: TalkSport.
N'ihe gbasara okwukwe, Fernandes ahapụghị ihe ọ bụla banyere okpukpe ya. Otú ọ dị, nsogbu ndị ahụ na-amasị ya ịbụ Onye Kraịst.
Bruno Fernandes Biography Video Nchịkọta:
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Bruno Fernandes. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Egwuregwu Sporting CP Football